မိသားစုနှင့်နေအိမ် / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
သင်၏အိမ်နီးချင်းဆိုက်ကိုအစီအစဉ်နှင့်မြေယာ Meza ၏အချိုးအကွေ့ရာသီဥတုသင့်တော်တွေ့ဆုံနေရပ်လိပ်စာအဘယျတည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်, ခြံစည်းရိုးနှင့်အိမ်နီးချင်းအဆောက်အဦးရွေးချယ်ဖို့ကောင်းလှ၏မြေယာရှိမရှိမြေယာမြေဆီလွှာဓာတုဗေဒရည်ရွယ်ချက်
အဟောင်းအပ်ချုပ်စက်ကို "Podolsk" ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: ကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်အံ့သြဖွယ် sews!
စျေးပေါဖြစ်ဖို့ကိုဘယ်လိုကြောင့်အိမ်ပြန်ရန်နီးစပ်မယ့်အဖြစ်အမှုအရာတန်ဖိုးရှိမဟုတ်ပါဘူးအိမ်မှာနေတဲ့ဆိုင်တစ်အပ်ချုပ်စက်ကိုလိုအပ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါစက်၏ပိုင်ရှင် Podolsk စက်ရုံထဲကနေ, ပြီးသားအသက်ဖြစ်၏။ အဘယ်သူသည်ရှေးဟောင်းပစ္စည်း၌ထားရန်အကြံပေးကိုမြင်ပေမယ့်ဒါဟာအကြီးအလုပ်ဖြစ်တယ်! သူမ၏, လိမ္မာပါးနပ်, လက်ထောက်, ငါလိုသောအကြောင်း
ကာကွယ်ဆေးထိုးရောဂါကနေကြောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကူညီပေးမလဲ အဘယ်အရာကိုကာကှယျဆေးလိုအပ်နေပါသည်နှင့်အခါကွောငျကလေး, သူတို့ကလုပ်ပေးအဖြစ် (ဗီဒီယို)
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
အဆိုပါကြောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးကာကွယ်ဆေးထိုးအမျိုးမျိုးသောရောဂါများဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဆေး၏သတိနှင့်ယုံကြည်မှုများနှင့်အတူကြောင်၏မသင်မနေရကာကွယ်ဆေးထိုးအချို့ကကြောင်ပိုင်ရှင်များ contraindicated ဖြစ်ပါတယ်အခါကြောင်၏အခြေခံစည်းမျဉ်းများ။ ဒါဟာမကြာခဏကြောင်းကာကွယ်ဆေးထိုးယူဆနေသည်
အင်္ဂါရပ်များကြောင်အီဂျစ်မောသားကိုမွေး။ တင့်တယ်, နာမငြိမ်, လိမ်မာသောနု
ဖော်ပြချက်ဇာတ်ကောင်စာကျွေးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှုသီးခြားဝတ်ရည် Features သားကိုမွေး Features - ကအထူးကုတစ်ဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အားလုံးအီဂျစ်မောကဲ့သို့သောအံ့ဖွယ်အဘို့စင်မြင့် setting အတူတူ, သင်ပထမဦးဆုံးပေးဝေ၏မူလအစနှင့်အခြေအနေများနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရရှိရမည်
သက်သတ်လွတ်အကြိုက်ဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်: ဘယ်လိုကြီးထွားဖို့, အထူးသဖြင့်အသီးအသီးအဘို့အဂရုမစိုက်
စတင်ဆင်းသက် site ကို site ကိုပြင်ဆင်မှု Mulching ရေဓာတ်မြေသြဇာပိုးမွှားများ၏တိုးတက်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေများရယူခြင်းဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာမကြီးထွားရန်သက်သတ်လွတ်ရှိပါတယ်သို့မဟုတ်သင်စက်ရုံအစားအစာသှားဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားရှိပါသလဲ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, အသီးများနှင့်
ဘာလုပ်ဖို့, စိုက်ပျိုးရန်လာသောအခါ: အမုန်လာဥတစ်ဦးမြှားသည်အဘယ်ကြောင့်5အကြောင်းရင်းများ
မုန်လာဥ arrow: ကကောင်းတစ်ဦးသီးနှံနှင့်မျှမ Bolt ရဖို့မုန်လာဥမျိုးစေ့ကိုကြဲဖို့ကိုဘယ်လိုမုန်လာဥစိုက်ပျိုးဖို့ကိုဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ဘာကြောင့်လဲ အမှန်တကယ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြီးနောက်အစောပိုင်းနွေဦးရာသီ၌ယဉ်ကျေးမှုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဗီတာမင် replenishes ။ သို့သော်
ဆန္ဒရှိပါကတစ်မြို့အိမ်သူအိမ်သားရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်၏ဌာနခွဲသို့လှည့်စေခြင်းငှါ - စက်ရုံမြိုးဆကျထောင်ပေါင်းများစွာ၏မျက်စိပေါ်၌ပန်းရောင်း-ချစ်သူများနှ, စိုက်ပျိုးမှု၏ပုံစံများကိုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်မူအရ, ကအရေးမပါဘူး - ဒါကြောင့်သစ်ပင်ပန်းမန်များတစ်ဒါဇင်မျိုးစိတ်ရှိသည်သို့မဟုတ်မှနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုရှိမရှိ
12... 15 နောက်တစ်နေ့ →